DHEGAYSO: Mid kamid ah Maamulada dalka oo dhawaan yeelanaya Ra’iisul Wasaare iyo Dad badan oo la yaabay! - Hablaha Media Network
DHEGAYSO: Mid kamid ah Maamulada dalka oo dhawaan yeelanaya Ra’iisul Wasaare iyo Dad badan oo la yaabay!
HMN:- Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira maamulkiisa, kadib kulan uu maanta Magaalada Baydhabo kaga qeyb galay.
Shariif Xasan ayaa su’aalo laga weydiiyay arrimo la xiriira Maamulkiisa iyo sidoo kale waxa ka jira in uu isku shaandheyn ku sameyn doono Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed.
HALKAN KA DHAGAYSO HADALKA SHIRIIF XASAN
Waxa uu sheegay Shariifka in qorshahaas la doonayo in lagu dhiso Gole Wasiiro oo tayo leh, wuxuuna xusay in Koonfur Galbeed uu u soo magacabayo Ra’iisul Wasaare, si Wasiirada uu ugu fududeeyo Holohoodo gaarka ee ay u baahan yihiin.